डा.सीके राउतको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको औचित्य सकिएकै हो ? – Nepali News नेपाली समाचार
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायक नबराज श्रेष्ठको पुन: आगमन
Homeअन्तरवार्ताडा.सीके राउतको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको औचित्य सकिएकै हो ?
–ई. दीपक कुमार साह
त्यतिले पनि नपुगे पछि आफै जनकपुर पुगी क्षदमभेषमा केही दिन डेरा तलाश गरी अन्त्यमा एउटा बेडरुम भएको एउटा फ्लायटमा बसेका थिए । एउटै बेडरुम भएपछि सपरिवार बस्दा डा.राउतको पढाई–लेखाईको क्रम नै ठप्प हुन पुगेको थियो, तर त्योभन्दा बढी अफ्ठ्यारो अतिथ्य सत्कारमा हुन्थ्यो । कोही भेट्न आएको खण्डमा कहिले सिढ़ीमुनी कुनामा त कहिले बाहिर घामको गर्मीमा भेट्नु पर्ने वाध्यता थियो । त्यो डेरा पनि मुस्किलले १० महिना टिक्यो ।
मंसीर १० गते जनकपुरको शिव चौकबाट उहाँको गिरफतारी पछि मंसीर १९ गते विवाह पञ्चमीको मेलाको अवसरमा जनकपुरको रामानन्द चौकमा भक्तजनलाई पानि खुवाइरहेका स्वराजीहरुको पानीको भाँडो फाल्दै गालिगलौंज गर्दै प्रहरी उपरीक्षकसहितको टोलीले धरपकड़ गरेको थियो । मंसीर २१ गते विवाह पञ्चमीको मेलाले छोडेर गएको फोहरमैलालाई स्वराजीहरुले सफा गर्न जाँदा धरपकड़ गरी सार्वजनिक मुदा लगाइदिएको दृश्यसहितका समाचारहरु स्थानीय टेलिभिजनहरूले प्रसारण गरेपछि र घरबेटीको घर प्रहरीले बारम्बार घेरेपछि आतिएका घरबेटीले तुरुन्तका तुरुन्त घरबाट निस्किने आदेश दिए ।
अर्को कुरा, कुनै मुद्दामा डा.राउतको नाम परेको अनौपचारिक स्रोतबाट थाहा हुने वितिकै आफै अदालत पुगेर उपस्थित हुने गरेका छन् । ता कि कारवाही प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढ़ोस्, कहिले पनि अदालतले जहिरी पूर्जीसमेत जारी गर्नु परेको थिएन । अहिले के पर्यो त्यस्तो घरमै आउनुपर्ने, दर्जनौ प्रहरी मिलेर घर नै घेर्नु पर्ने ? डा.राउतलाई खबर गरे भइहाल्थ्यो, ऊ आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा अदालत पुग्थे ।
यस्तै कुरा मनमा आएतापनि डा.राउतले फोनमा उतर दिए ‘पक्राउ पुर्जी छ कि भनेर सोधनुस्’ यति भन्दै फोन काटेको के थियो एक मिनेट पनि शायद बितेको नहोला त्यतीकैमा दुईवटा ग्रीलको ताल्चा फुटाएर बन्दुक हाथमा बोकेर बुट ठकठकाउँदै दर्जनौ प्रहरी हुलिएर डा.राउतको अगाडी खड़ा भइसकेका थिए । लाग्थ्यो कमाण्डोहरूको कुनै छापामार अपरेशण होस् । डा.राउतले सोधे,‘पक्राऊ पूर्जी छ कि ? । एउटाले देखाए । राज्य विरुद्धको संगठित अपराधमा अनुसन्धान । ‘मलाई लुगा लगाउन दिनोस्, एक दुईजना मात्रै बेडरुमसम्म हिडनुस्’ डा.राउतले भने त्यतिकै हिडनोस् भनी ढिपी गरे तापनि डा.राउतले जिद गरे पछि लुगा लगाउन दिन प्रहरीहरु राजी भए । तर १/२ जना हैन दर्जनौले डा.राउतलाई घेरेर लहरै लगे । त्यो भिड़भाड़मा छोरालाई बिर्सी सकेको रहेछ । ऊ सीढीमा ‘स्टाच्यू’ भइसकेको रहेछ । छोरी भने छतमा लुकी सकेकी थिइन् । लुगा लगाएर आउँदासम्म छोरा जस्ताको त्यस्तै थियो । ‘ममीलाई हैरान नगर्नु छोरा भनेर भन्दा छोराले आँखा पनि झिम्काएन । प्रहरी घेराबाट डा.राउतले उसलाई छुन सकेन । तल र्ओलेर गेट बाहिर निस्किदा साँच्चिकै प्रहरीलको तीनवटा भ्यान लियाएको रहेछ, दर्जनौ दर्जन प्रहरीले घेरा हालेको रहेछ, डराएका मान्छेहरु परपर खडा भएर मुकदर्शक बनेको रहेछ । एक जनाले मोबाइल लिएर खडा भएको डा.राउतले देखे । छोटो समयमा दुई चार शव्द बोलेर प्रहरी भ्यानमा बसेका थिए। कहाँ लग्ने थाहा थिएन ।
के शान्तिपूर्ण मार्ग अपनाउनु नै राउतको अपराध हो? के गांधी र मंडेलालाई आर्दश मान्नु नै अपराध हो? शायद हो ! शायद विष नभएको ‘हरहरा’ र्सप हुनु नै अपराध हो, त्यही भएर त कहिले राज्यले त काहिले प्रहरीले त कहिले मिडियाले त कहिले कथित मानवअधिकारकर्मीले राउतको पुच्छर समातेर नचाई राख्छन् । प्रताडित गरी राख्छन् । सर्बोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाहरु राज्यकै मन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरूसँग सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दै हिँड़छन्, नरसंहारकहरू बन्दुकधारीहरू खुलमखुल्ला छन् । तिनीहरुलाई समात्ने हिमत नेपाल प्रहरीसंग छैन तर राउतजस्ता एउटा निरीह प्राणीको घर घेरेर बारम्बार गिरफतार गरी आफ्नो झुठो मर्दानगी सावित गर्न खोज्दैछ ।
करौंड़ो अर्बौंमा भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूको सम्पति स्रोतबारे मुख खोल्ने सक्दैन, तर जिल्लाको कार्यक्रमा जाँदा बस टेम्पुभाड़ा र रिचार्डÞ कार्डको पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोधी आफ्नो तिक्षणता देखाउँछन् । ‘छिद्दान्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठान्ति पादयास्’ भनेरै हो २०६३ सालमा उपेन्द्रलाई हिरासतमा राख्दा लहानमा आधा दर्जन गाडीलाई आगोमा झोंसे झै राउतका कार्यकर्ताले गाडीमा आगो लगाउन नसकेकोले त होला लहानको यो बिच बाटोमा हिरासतमा सतौ हप्तासम्म यातना भोगि राखेका छन् । के राउतसंग त्यो हैसियत न भएको हो ? २०६३ सालमा उपेन्द्र यादव हिरासतमा जाँदा उनको भाषण सुन्न लहानमा २०÷२५ जना जम्मा हुदैन्थे । राउत कहाँ लाखौ समर्थक भएर त्यो हैसियत नभएको हो ।
(हिरासतमा विभिन्न व्यक्तिसँग भेठघाट हुँदाँ गरेको कुराकानीमा आधारित/लेखक मधेशी अधिकारकर्मी हुन् ।
इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति मुबारक जेल मुक्त